तपाइँ कसरी एक सुत्ने झोला सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ तापक्रम दर दर फिट गर्न फिट गर्न? - चीन हरित शिविर उत्पादनहरू
तपाइँ कसरी एक सुत्ने झोला सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ तापक्रम दर दर फिट गर्न फिट गर्न?
जब तपाईंसँग निन्द्रा झोलाको लागि टेंडर वा आरएफक्यू हुन्छ, तर तपाईंको ग्राहकसँग कुनै विशिष्टता हुँदैन, उनीहरूले तपाईंलाई केवल ब्यागहरू कुन तापक्रमको प्रयोग हुनेछ वा कुन उद्देश्य प्रयोग गरिनेछ भनेर आवश्यकताहरू प्रदान गर्न सक्दछ। उद्देश्यका लागि फिट गर्नको लागि तपाईं कसरी सिर्जनात्मक ब्याग गर्न सक्नुहुन्छ?
तापमान दरको लागि मुख्य पक्ष के हुनेछ?
यसले ममी आकार, खामको साथ खामको आकार र खाम समावेश गर्दछ। कम आकारको दरमा पुग्न आमा आकार राम्रो छ, खाम र आकृति आरामदायक छ, तर अत्यन्त कम शीतोष्ण दरमा पुग्न गाह्रो छ। हुडको साथ खाम ठूलो र कम आरामदायी, खाम र कम तापमान स्तरमा पुग्नको लागि लिफाफा भन्दा राम्रो छ, तर आमा जस्तो राम्रो तापमान कम स्तरमा पुग्न राम्रो छैन।
हामी यसैले इन्सुलेशन निर्माण र अन्य निर्माणहरू सन्दर्भ गर्दछौं।
Ly साधारण १ तह। यो निर्माण सामान्यतया गर्मी झोला वा season मौसम स्लीपिंग ब्यागको लागि प्रयोग गरिन्छ।
La दुई ​​तहहरू निर्माण, जुन चिसो मौसम प्रयोगको लागि फिट गर्नको लागि स्लीपिंग ब्याग सिर्जना गर्ने सबैभन्दा बढी तरीका हो। हाम्रो अनुभवका अनुसार यो राम्रोसँग काम गर्दछ। धेरै सैनिक झोला झोला संग
दुई तह निर्माण।
· तीन वा अधिक तहहरू, यति कम तापमान दरमा पुग्नको लागि, हामी अबसम्म बढीमा la तहहरू स्लीपिंग ब्याग बनाउन सक्दछौं।
· न्यानो कलर सामान्यतया निन्द्रा झोलाको माथिल्लो भागमा झिकिएको हुन्छ वा झोला भित्र तातो हावा लक गर्न।
यो प्राय: आमा सुत्ने झोला र हुडको साथ झोला झोला झोलाको लागि प्रयोग हुन्छ।
· जुत्ता दाँतको झोलाबाट चिसो मौसम झोलामा पर्न रोक्न वाइन्ड बफल सामान्यतया जिपरसँगै ठीक हुन्छ।
String सकेसम्म सानो खुला खोल्न स्ट्रिंग कोर्नुहोस्।
Wind हवाको सुई प्वालबाट आउनबाट बचाउन शेलमा कुनै पन्जाइ छैन।
Wind सुधारिएको "डबल एच कोठा" हावालाई सुई प्वालबाट आउन रोक्नको लागि। कृपया प्रायः सोधिने प्रश्नहरू सन्दर्भ गर्नुहोस्। https://www.greencampabc.com/faqs/
कुन सामग्री स्लीपिंग ब्यागको लागि प्रयोग गरिनेछ समशीतोष्ण दरमा ठूलो प्रयासहरू छन्। यसले इन्सुलेशन र खोल र अस्तर समावेश गर्दछ।
सामान्यतया, त्यहाँ सुत्ने झोलाहरूका लागि इन्सुलेशनको रूपमा दुई प्रकारका सामग्री प्रयोग हुन्छन्। एउटा कृत्रिम फाइबर हो, अर्को अर्को तल छ। डाउनले समान भोल्युममा आधारित कृत्रिम फाइबर भन्दा तल्लो तहसम्म पुग्न सक्छ। बिभिन्न कृत्रिम फाइबरको पनि फरक प्रदर्शन हुन्छ।
शेल र अस्तर कपडा
ग्रीष्मकालीन झोलामा सामान्यतया हल्का तौल कपडा र चिसो मौसमको झोलामा सामान्यतया नरम र आरामदायी कपडा हुन्छ, जुन न्यानो राख्न पनि राम्रो हुन्छ।
सुत्ने झोलाहरूका लागि तापक्रम दर परिभाषित गर्न के त्यहाँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ?
त्यहाँ दुई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू छन्, EN ISO13537 र EN ISO23537। EN ISO13537 पहिले सिर्जना गरिएको छ, EN ISO २53737। सुधारिएको संस्करण हो। EN ISO13537 & EN ISO23537 सामान्यतया धेरै समान मिल्दोजुल्दो छ र यी दुबै मानक मान्य छन्। EN ISO23537 का परीक्षण वातावरणको बारेमा मात्र विस्तृत विवरण छ। दुबै २ मापदण्डको लागि भर्खरको संस्करण आईएसओ १3537-20137-२०१२ र आईएसओ २5-20137-201-२०१ are हो। यी दुई मापदण्डको साथ, हामी समशीतोष्ण मोटामोटी परिभाषित गर्न सक्छौं। किन यो ठ्याक्कै ठीक छैन, किनकि फरक व्यक्तिको फरक भावना हुन्छ। र एक अन्तर्राष्ट्रिय मानक परिभाषित गर्नका लागि त्यहाँ केहि पक्षहरू यति व्यावहारिक हुँदैनन्, जस्तै परीक्षण विधि, खाम र मामी फरक हुन्छन्।